DF Soomaaliya oo ciidamo hor leh geysay gobolka Gedo & Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DF Soomaaliya oo ciidamo hor leh geysay gobolka Gedo & Wararkii ugu...
DF Soomaaliya oo ciidamo hor leh geysay gobolka Gedo & Wararkii ugu dambeeyay
Muqdisho (Halqaran.com) – Dowladda Soomaaliya ayaa waxay weli wadaa qorshaheeda ay ciidamada ugu daabuleyso Gobolka Gedo, tan iyo markii la sheegay inuu xabsiga ka baxsaday Wasiirka Amniga Jubbaland, Cabdirashiid Xasan Cabdinuur (Janan).
Illaa boqol askari oo ka tirsan ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Danab ayaa maanta diyaarado lagu geeyay Degmada BeledXaawo, ka dib markii laga qaaday Magaalada Muqdisho.
Degmada BeledXaawo ayaa waxaa horey ugu sugnaa Ciidamada Gorgor ee Xoogga Dalka ka tirsan iyo Ciidamada Booliska ee sida gaarka u tababaran ee Haramcad.
Ciidamadan ayaa waxay ku biirayaan ciidamadii horey ay Dowladda Federaalka u geysay Degmooynka Luuq, Doolow iyo Beled Xaawo, oo leesku yiraahdo (Daawo).
Ciidamada Dowladda Soomaaliya ee ku sugan Degmada BeledXaawo ayaa waxay goor sii horeysay ay mar isu dhaceen tiro yar oo ka mid ah Ciidanka Daraawiishta Jubbaland, oo ka ymid duleedka Degmada BeledXaawo.
Ciidamada maanta la geeyay BeledXaawo ayaa waxay ku soo aadaysaa, laba toddobad ka dib markii Ciidamada Dowladda ay bilaa dagaal ku wareegeen gacan ku haynta degmadaasi, 4-tii bishan.
Ka dib khilaafkii ka dhashay doorashadii uu murunka hareeyay, laguna soo doortay Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayay dowladdu bilowday culeyska ay Jubbaland ugala wareegeyso Gobolka Gedo.
Billihii ugu dambeeyay ayay Dowladda Somaliya ka shaqaysay kala fur furista Gudoomiye-yaashii Degmooyinka Gobolka Gedo iyo Masuuliyiinta Gobolkaba, iyadoona inta badan ka horkeentay Maamulka Jubbaland.
Si kastaba, masuuliyiinta Jubbaland ayaa waxay Madaxda Dowladda Federaalka ku eedeeyeen inay Gobolka Gedo ka jarayaan Jubbaland inteeda kale.
DF Soomaaliya oo ciidamo hor leh geysay gobolka Gedo